Jaamacadda Admas oo loo aqoonsaday hormuudka Jaamacadaha Somaliland kadib guushii ay ka soo dheelmeen tartankii Turkiga [Daawo Sawirrada] | Salaan Media
Jaamacadda Admas oo loo aqoonsaday hormuudka Jaamacadaha Somaliland kadib guushii ay ka soo dheelmeen tartankii Turkiga [Daawo Sawirrada]
Hargeysa [SM]Xaflad balaadhan oo lagu sagootinayey 7arday oo kamida ardaydii waxbarashada bilaashka ah [Shoolership]ka helay dalka Turkiga ee Jaamacadda Admas Univertsity Collage ayaa lagu qabtay Hotelka Maan-soor ee magaalada Hargeysa.
Munaasibadda xaflad kooban oo hayd casho sharafeed lagu maamuusayey kaalinta ay ardaydaasi ka galeen imtixaanaadkii lag qaaday ardaydii faraha bandayn ee Jaamacadaha dalka waxaa ka soo qaybgalay maamulka,ardayda,waalidka iyo saaxiibada kale ee reer Hargeysa.
maamule ku xigeenka Jaamacadda Admas Xuseen Cabdillaahi Maxamuud oo ka hadlay xafladdaas waxa uu si qoto dheer uga hadlay tayada maamulka iyo macalimiita iyo guud ahaanba nidaamka waxbarasho ee ka jira Jaamacadda taas oo laga dheehan karayo guushii layaabka lahayd ee ay ardaydii ka qaybgashay tartankii Jaallacadaha Somaliland oo dhami u haleen imtixaankii loo galayey tartankii Shcoollere ship-ka ahaa ee dalka Turiga.
Mr Xuseen waxa uu ka warramay tirada guud ee waddamadii u tartamay inay wax ka helaan waxbarashada bilaashka ah ee dalkaas Turiga oo Aad u farfabadnaa sida uu sheega iyo araydii dalkastaba haw dhaseene ka qaybgalay tartankaasi.
“80 dal baa u tartamay jaamcadahan waxaana ka qaybgalay oo ku guuleystay 55 000 arday Somaliland-na waxay ka heshay 10 arday 7 kamid ahina waxay ka soo bexeen Jaamcadda Admas waana kuwan dhinaca inaga fadhiya”sidaa waxaa y idhi maamule ku xigeenka Jaamacadda Admas Xuseen Cabdilaahi Maxamuud.
Dhanka kalana Mr Xuseen waxa uu ka waramay qaarkamida ardayda Jaamacada Admas ee tartankaasi ku guuleystay inay ahaayeen kuwii igu dhibacaha sareeyey imtixanaandkii la qaaday “anaga farxad bay noo tahay inay 10 kii arday ee lagay Schoolerkaasi 7 kamid ahi ay ka soo bexeen Admas wasaaradda waxbarashadana waxaan leeyahay ka makhraati kaca kaalinta Jaamacadda Admas kaga jirto waxbarashada Jaamacada dalka ka jira” ayu yidhi maamule ku xigeenka Admas Univetrsity Xuseen Cabdillaahi Maxamuud.
Xuseen waxa kale oo si balaadhan ugu dardaaray ardyadaasi inaysan ku ciyaaran furrsadda qaaliga ah ee ay heleen isla markaana ay uga fogaan l ahaayeen inay ku tahriibaan jaaniskaasi oo ay sida lagu eedeeyo dhinaca koonfurta oo kale ay Yurub iyo Maraykanka u tacaburaan “waxaad huwan tihiin calankii dalkiina iyo karaamaddii umadda qaranka markaa waxaa laydinka rabaa inaydaan fursadan qaaliga ah ugaga faa’
Iidaysan tahriib aad Yurub iyo Maraykanka ugu tahriibtaan sida lagu xanto marar badan walaaleheena koonfurta oo kale” ayuu yidhi Xuseen Maxamuud.
Waxaa isaguna madashaa ka hadlay Dr Swamy oo ah Macalinka ay ardadani intooda badadni ka soo bexeen isla markaana ku hadlayey magaca department-ka dhaqaalaha waxaanu ka warramay taakriikhda dhaqaalaha dunidu siday uga qayb qaadato nolosha toosan ee Aadamaha dunida ku nool waxaanu urajeeyey ardaydaasi inay waxbadan ku soo kordhin doonaan dhaqaalaha Somaliland mustaqbalka soo socda.
“hadii ay 7 kamid ahi nodeen 10kii ugu saraysay waxaan shaki ku jirin inay Admas ku jiraan boqolaal kale oo aan rajaynayo inaynu sidan oo kale u qaban doono xaflado kale”sidaa waxaa yidhi Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo xidhiidhinayey barnaamijkaasi.
Waxaa isaguna madashaa ka hadlay Maxamed Guudle oo ku hadlayey m agaca ardayda tartankaasi ku guuleysatay waxaanu Mr Guudle ka warbixiyey taariikhdiisii hore ee xagga waxbarashada iyo sidii uu ku soo gaadhay heerkan uu maanta taagan yahay.
Dhanka kalana waxa uu mahad balaadhan u celiyey cidkasta oo ka soo qayb qaadatay guushii waxbarashadiisa maanta heerkaa maraysa gaar ahaan macalimiintiisii iyo waalidkii dhalay “marka uu qof guuleysto waxaa badan inay dadku sheegtaan iyaga uuni guushaas balse anigu waxaan caawa halkan uga mahad celinayaa cidkasta oo ka soo qaybqaadatay waxbarashadaydii” ayuu yidhi Maxamed Guudle.
Sidoo kale Mr Guudle waxa uu si balaadhan ugu mahad celiyey Dawladda Turkiga oo ku deeqday inay ardaydani ka helaan dalkooda waxbarashada bilaashka ah [Schoolership] waxaa isaguna madasha ka hadlay Cismaan Awrliqi oo kamida haa waalidka dhalay midkamda ardaydaasi tartanka ku guuleysatay waxaanu mahad u celiyey dalka Itoobiya oo “aniga iyo dad badan oo aan ka mid ahay waxay Aaminsan yihiin inay Somaliland hooyadeed tahay Ethiopia” ayuu yidhi Mr Awrliqe.
Mr Awrliqe waxa uu ardayda ku booriyey inay waxyaabo badan ilaaliyaan sida inay soo qaataan aqoontooda iyo xadaaraddooda qadiimiga ah “hadii layku keen barbar dhigo inaga iyo Turkiga waxaynu isku noqonaynaa maalin iyo habeen oo intaa ay inaga horeeyeen ayey inaga aqoon badan yihiin” ayuu yidhi Mr Awrliqe.
waxaa isaguna madashaasi ka hadlay Professor Ibraahin Xaaji Muxumed Aaye waxaanu sheegay inuu la socday Axmed Ismaaciil Samatar balse uu uga hadhay dalabaad uga yimid xaga wasaaradda waxbarashada oo uu hadda ka yahay lataliye dhinaca waxbarashada ah.
“waxaan hambalyeynayaa Jaamacadda Admas oo jaamacadihii kale kaga guuleysatay tartankii ay wada galeen waxaanay taasi muuinaysaa inay Jaamacadda dada tayo lihi joogaan waayo dadka tayada leh waxaa soo saari kara uun dad tayo leh” ayuu yidhi Prfessor Aaye.
“anigu waxaan helay Schoolership-kan oo kale 34 sano ka hor waxaanan filayaa inaydaan dhalamba xiligaa” ayuu yidhi Professr Ibraahin Sheekh Muxumed Aaye “dalka Maraykanka oo kale ayaan anigu Aad ugu warhayaa oo waxbarashada kharasheeda kaagaga baxayaa waxaa laga yaabaa marka uu ugu yaraado inuu noqonayo $6,000” ayuu yidhi Mr Aaye.
Dhinaca kalana Professor ku waxa uu sheegay inay jiilka Somaliyeed ee maanta joogaa ka fursan badanyihiin xiligii ay waxbaranayeen kuwii uu kamid ka ahaa “maanta waxaan nagaga nasiib badan tihiin idinka oo guriyihiinii jooga oo eheladiinii la jooga ayaad Jaamacadihii baranaysaan” ayuu yidhi Pro Aaye.
“waxaan idinka rajaynayaa inaydaan noqon doonin kuwaa umaddoodii ka cararay balse Aad noqon doontaan kuwii dalkooda wax u soo barta ee anfaca mustaqbalka” ayuu yidhi Professor Aaye waxaanu mahad balaadhan u jeediyey Dawladda dalka Turkiga “waxaynu maqli jiray uun Maraykan iyo kuwo kale ayaa bixiyey Schoolership balse waa ilaahay mahadiis hadii ay soo bexeen kuwa kale oo Muslimiin ah oo ka khayrbadan sida Turkiga oo kale” ayuu yidhi Prossor Aaye.
Waxaa isaguna madasha xafladdaasi ka hadlay Cabdiqaaditr Dhaashane oo ku hadlayey magaca gudiga sare ee tacliinta waxaanu ka waramay taariikhda waxbarashada Somaliland “aniga waxay Iitahay sharaf iyo farxad gaara inankii yaraa ee markii dalka la soo galay dhawr iyo sagaashankii dhagaxa iyo daasadaha ku fadhiisanjiray inuu caawa heerkan soo gaadhay” ayu yidhi Mr Dhaashane.
“waxaa caawa soo baxay wax cajiib ah waayo Jaamacadihii kale ee ka horeeyey Admas waxay ku dhaaftay waa xagga tayada waxaanan leeyahay hambalyo hambalyo Jaamacadda Admas University College oo soo saatay arday tayo leh” ayuu yidhi Mr Dhaashane.
“annagu hadii Aanu nahay guddiga tacliinta sare waxa nasaarani waxa weeye inaanu soo saarro waxtayo leh jaamacaduhuna waa inay ku fikiraan inay soo saaraan arday tayo leh sida Admas oo kale ayuu yidhi Mr Dhaashane.
“meesha Aad u socotaani maaha meel barwaaqo uun ah balse waxaa laga yaabaa inay mararka qaarkood idinku kalifto inaad nolosha Roodhi ku dabartaan ee sidaa ula socda oo adkaysta” ayuu yidhi Mr Dhaashane,Professor Somon Wajira oo ku madlayey magaca kulliyadda hormarinta caalamiga ah ee Jaamacadda Admas University College oo hadal kooban madasha ka jeediyey waxa uu dhalinayrada Fursadda helay ku booriyey inay dalkooda wax u soo bartaan.
Cabdi-xakiim oo ahaa ardaygii ugu sareeyey hay’adda shaqaalaha dalka Itoobiya imtixaankaadkii ay galeen sanadkan isaga oo markii horana ka tagay xafiiska haydda shaqaalaha balse sii maray Jaamacada Admas oo sida uu sheegay waxbadan ka caawisay waxbarashadiisii iyo jaaniskii uu ku helay ‘ilaahay ka dib waxaan si gaara ugu mahad naqayaa maamulka Jaamacadda Admas oo si weyn iigala soo qayb qaatay waxbarashadaydii Aan ku soo qaatay dalka Itoobiya” ayuu yidhi.
Gaba gabadii xafladdaasi waxaa ka hadlay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Khadar Axmed Diiriye waxaanu sheegay inay lagama maarmaan tahay inay ardaydaasi ka faa’iidaystaan fursaddan qaaliga ah isaga oo tusaale ahaan ugu soo qaatay inuu kamid ahaa araydii dalka Talyaaniga ku sanadkii hore ku soo baratay luuqadii dalkaasi Talyaaniga waxaanu ku dhiiri galiyey ardaydaasi inay ku dadaalaan barashada luuqadda dalkaasi Turkiga.
“Jaamacadda Admas dee waxaan leeyahay wakaas oo waxaa idin amaanay Gudigii Tacliinta sare anaguna ka wasaarad ahaanu idinku xisbaabtamidoonaa kaalintiina qiimaha leh waanad mahadsantihiin” ayuu yidhi agaasimaha tacliinta sare Khadar Axmed Diiriye.
Gaba gabadii xafladdaasi lagu maamuusayey sagootiska ardayda kaalinta qiimaha leh ka gashay tartanka imtixaanaadkii Jaamacadaha Somaliland oo dhan waxaa la arkayey maamulka iyo macalimiinta oo dhinac taagan ardayda magaca dheer u soo jiiday Jaamacadda Admas si ay sawirro xusuusta gala uga reebaan ardayda ka hor inta Aanay maalinta burrito ah ka duulin dhahaba diyaaradaha ee magaalada xeebta ah ee Bebrta iyaga oo ku sii jeeda dalka Turkiga ee ay ka heleen waxbarashada lacag la’aanta ah.